Udi: YouTube | Gosi Top
Olee otú inweta ihe kasị mma elu àgwà olu Audacity?
Ndị na-esonụ ga-enye gị anya audio àgwà na-enweghị mkpọtụ na ezi bass na punchy trebles. Ị nwere ike ịnwale-eso nzọụkwụ site Ndekọ a sample. In you sample leave 3-5 Sekọnd ke mmalite na ọgwụgwụ. Say “How did you know that I was going to have a peanut butter…
YouTube Enweghị asịsa Bish Jaishi